Malunga nathi - Kaiyuan Chicheng Abrasive Material Co., Ltd.
Ifowuni: +86 18041030986
Inkampani Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd.
Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd. yasekwa ngo-2003 Kuyinto inkampani urhwebo ngokukodwa urhwebo lwasekhaya lwangaphandle, self-ulawulo kunye arhente yokungenisa kunye nokuthunyelwa kweempahla kunye nobuchwepheshe. Inkampani ibekwe kwiSithili saseHedong, eTianjin. Njengesixeko sezibuko, iTianjin inenzuzo yendalo yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ishishini, kwaye ukuthuthwa kufanelekile.
Ezona mveliso ziphambili zenkampani ngoku zibandakanya: iimveliso zeekhemikhali ze-potassium fluoborate (ngaphandle kwempahla eyingozi kunye neziyobisi zangaphambili), izinto ezingavunyelwanga (zirconium corundum, abrasives zeceramic, cryolite), izixhobo ezirhabaxa (iivili ezahlukeneyo zokugaya, ivili lekhasi, i-chip, i-emery disc) kunye nelaphu lemizi-mveliso. (Yonke ipholiyesta, yonke ikotoni, ipholiyesta yomqhaphu) yelaphu le-emery, njl.
Okwangoku, isikali sokurhweba senkampani siyanda imihla ngemihla, kwaye inkampani iphumelele ukuthembela kubathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngomgangatho wemveliso kunye nodumo oluhle! Oku kwenza ukuba inkampani yethu kunye neemveliso zibe negama eliphezulu kunye nesabelo sentengiso ekhaya nakumazwe aphesheya. Kwangelo xesha, sihlala sibeka iimfuno zabathengi bethu kuqala, kwaye sizinikezele ekunikezeleni iimveliso kunye neenkonzo ezingcono kubathengi bethu.
Ifilosofi yethu yeshishini: "Ukujonga ngokunyaniseka, umthengi kuqala"
Imveliso yethu: "Unikezelo olwaneleyo kunye nexabiso elifanelekileyo"
Ndiyakholelwa ukuba yonke intsebenziswano iza kusisondeza komnye nomnye!